RASMI: Real Madrid vs Eibar, Mallorca vs Barcelona –
By axadle Last updated May 24, 2020
Horyaalka waddanka Spain ee LaLiga ayaa ugu dambayn la fasaxay inuu si rasmi ah dib ugu bilaabmo Isniinta labaad ee ugu soo horreysa bisha soo socota oo ku beegan June 8, waxaana kulamada ugu horreeya ay noqon doonaan ciyaaro adag oo ay ku lug yeelan doonaan Real Madrid, Barcelona iyo dhamaan 20-ka naadi ee heerka koowaad.
Ra’iisal Wasaaraha Spain oo maanta hadlay ayaa shaaciyey go’aanka rasmiga ah ee dawladdiisa oo ah in horyaalku fasax yahay laga bilaabo waqtigaas.
Idaacadda Cadena SER ayaa hore u shaacisay in jadwalka rasmiga ah ee kulamada horyaalka lasoo saari doono May 28, ayna ugu horreyn doonto ciyaarta derby-ga ah ee u dhex mari doonta Sevilla iyo Real Betis oo Jimcaha June 12 ay is haleeli doonaan, laakiin ciyaartan ayaa waqtigaas kasoo horreyn karta afar maalmood.
Haddaba, sidee ayay noqon doonaan kulamada ugu horreeya ee horyaalka waddanka Spain ee LaLiga Santander?
Sida horeba loo sheegay, Sevilla vs Real Betis ayaa albaabada loogu furi doonaa garoomada marka ugu horreysa, waxaana ciyaartan ay ka dhici doontaa garoonka Sevilla.
Kooxda hoggaanka horyaalka LaLiga haysa ee Barcelona ayaa kulankeeda ugu horreeya u safri doonto garoonka Son Moix ee Real Mallorca, halka Real Madrid oo laba dhibcood ka dambaysa Barcelona ay garoonkeeda Estadio Alfredo Di Stefano ee Valdebebas ay ciyaartii ugu horreysay muddo dheer kaddib ku martigelin doonto markii ugu horreysay kooxda Eibar.
Athletic Bilbao ayaa horyaalku ugu bilaabmi doonaa nolol cusub oo uu ka maqan yahay weeraryahankeeda ruug-caddaaga ah ee Aritz Aduriz, waxaanay garoonkeeda San Mames ku qaabbili doontaa Atletico Madrid.
Kulamada usbuucan oo noqon doona kuwa 28aad, waxa kale oo isku haleeli doona Valencia iyo Levante oo isku magaalo ah, kulankooda loo tixgeliyo inuu yahay Valencia derby, waxaanu ka dhici doonaa Mestalla Stadium.
Kooxda sannadkan wacdaraha dhigaysay ee Real Sociedad oo doonaysa inay ka qayb-gasho Champions League ayaa waxay garoonkeeda kusoo dhoweyn doontaa Osasuna, halka Getafe oo afraad fadhidaa ay Granada jilbaha is dari doonaan.
Marka laga yimaaddo dagaalka Real Madrid iyo Barcelona ay ugu jiraan hanashada horyaalka, waxa iyaguna jira saddex kooxood oo xarbi adag u mari doona sidii ay uga badbaadi lahaayeen inay dib ugu noqdaan heerka labaad, waana Espanyol oo kooxda ay boosaskaas ku hirdamayaan ee Alaves ay is haleeli doonaan, halka Leganese oo ah tan labaad ee horyaalka oo dhan ugu hoosaysa ay martigelin doonto Real Valladolid. Celta Vigo oo 17aad fadhida ayaa garoonka Blaidos jilbaha ay isku dhigan doonaan Villarreal.
Kulamada usbuuca 28aad oo dhamaystiran:
Leganes – Valladolid
Mallorca – Barcelona
R. Sociedad – Osasuna
axadle 2210 posts
White defendant “used rattlesnake” after…
JAWAAB LA SUGAYEY: Taageereyaasha Liverpool Oo Jawaabtii La
Africa’s Sahel area turns into the newest preventing…
Libyan unity authorities claims full management over…